မပန်ရေ မင်္ဂလာပါ။ Cbox မရှိလို့ ဒီထဲပဲ အော်သွားတယ်။ Happy New Year!!!
တောက်ဝင်းနေမယ့် မိုးသောက်ကြယ် ... ။
ပန်ပန်နဲ့ ကိုပေါရဲ့ ကဗျာလေးကို ဖတ်ပြီး မမေလည်း ရေးချင်လာလို့ ... ရေးလိုက်မိပါတယ်။
မင်္ဂလာနှစ်သစ် ဖြစ်ပါစေ ... ပန်ပန် ... ။
ဟယ်ရီဒိုရာရေ ဆီပုံးမတွေ့ လို့ဒီမှာဘဲ အော်ခဲ့မယ် လာခဲ့ကွာ နစ်သစ်ကျရင်
•.¸¸.•♥☆´¨`☆♥•.¸ ¸.•` မင်္ဂလာရှိသော နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ ကြပါစေရှင် ♥•.¸ ¸.••.¸¸.•♥☆´¨`☆♥•.¸ ¸.•
မပန်ရေ ပျောက်လှချီလား ...လာလည်သွားတယ် .. အိမ်ရှင်မရှိပေမယ့်လည်း.... မင်္ဂလာနှစ်သစ်ပါနော်
မင်္ဂလာနှစ်သစ်ပါ မပန်ရေ.. စီဘောက်စ် ဖြုတ်ထားလို့ လာအော်သွားတယ်..... ချစ်မ အာဘွားးးးးးးးးးးး :)
မပန်ဒို ပျော်ရွှင်ဖွယ်နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေ။ စာတွေ ဆက်ရေးနိုင်ပါစေ။ ကိုယ်ယုံကြည်တာကို အောင်မြင်စွာလုပ်နိုင်ပါစေ ။
လိုအင် ဆန္ဒပြည့်ဖွယ် ၂၀၀၈ ဖြစ်ပါစေ။
လှပတဲ့ ကဗျာလေးတွေ ရေးသွားသူ. ဆုမွန်ကောင်း တောင်းသွားကြသူ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အားလုံးပျော်ရွှင်ကြပါစေ။
မမ....ကြယ်ဆိုတဲ့ကဗျာလေးအရမ်းဖတ်လို့ကောင်းတယ် သူများတွေလိုပြန်မစပ်တတ်လို့ ဖတ်လို့ကောင်းတယ်လို့ ပဲပြောသွားရတာခွင့်လွှတ်ပါနော်....